Semalt: Nahoana ianao no mila mifantoka amin'ny Marketing eo an-toerana?
Amin'izao fotoana izao, noho ny famoahana sy ny tombontsoa azo avy aminy, ny nentim-paharazanaNy orinasa dia manomboka mahatsapa fa hahazo tombony kokoa izy ireo raha manaiky ny marketing ara-nomerika.
"Ny taona amin'ny finday" no resadresaka tamin'ny tontolo nomerika nandritra ny taona maro.Voalaza fa ny taona 2014 no fahatelo manaraka ny "taona ny finday". Ny taona manaraka, hatramin'ny 2016, dia nahazo izany koaacclamation araka ny LifeHack. Izany dia manondro ny fiakaran'ny fitomboan'ny fitaovana finday hitombo besehatra nipoitra tao amin'ny tranonkala fa tsy taona voafaritra - ltc insurance premium.
Mpitantana Success Successor Semalt ,Andrew Dyhan, dia manome fahatakarana ny zava-dehibe amin'ny marketing ara-nomerika ao an-toerana sy ny maha-zava-dehibe azy ankehitriny.
Ny antontan'isa dia milaza fa:
Ny vola miditra Facebook amin'ny tombana ho an'ny 2016 dia 26 lavitrisa dolara. Fitaovana findaydia mahatratra 80 isan-jato amin'izany (21.98 lavitrisa dolara)
Hatramin'ny 69 isan-jaton'ny fampirimana fampiroboroboana dizitaly miverina amin'ny fitaovana finday.
Miaraka amin'ny mpampiasa 500 tapitrisa, Instagram dia miara-miasa amin'ny maha-sosialy mitombo haingana kokoa
, ary mifandray mora amin'ny marketing Facebook.
Famoahana angona avy amin'ny Thrive Analytics, lahatsoratra e-Marketer, orinasa madinika sy mediumao Etazonia dia handany ny vola bebe kokoa amin'ny dokambarotra amin'ny fampiasana bebe kokoa ny mobiles amin'ny taona 2017. Ny anton'izany fanapahan-kevitra izany dia ny misimisy kokoaManohy manana smartphones ny olona. Ny valopolo isan-jaton'ny mpampiasa aterineto any Etazonia dia manana smartphone mifototra amin'ny valin'nyComscore. Ny sasantsasany amin'ireo antony mahatonga ny smartphones manohy mihamitombo dia satria namorona C-series ho an'ny iPhone,Android dia manana smartphones amin'ny ambany baolina izay nomen'ny ankamaroan'ny mpitatitra, ary toeram-pivarotana smartphone matanjaka faharoa.
Ny sasany amin'ireo fahafahana manararaotra ny fandraharahana dia:
Google AdWords sy Facebook Ads ho an'ny tanjona eo an-toerana.
Ny filter snapChat mikendry ireo mpampiasa amin'ny toerana voafaritra..
Ny dokam-barotra dia manampy amin'ny fametrahana ny orinasa ao amin'ny Yelp.
Ny fitomboana sy ny lazan'ny Instagram.
Ny raharaham-barotra nentim-paharazana dia tokony hampiasa ny fiarandalamby nomerika Raha tsy izany,Ireo mpilalao ambony indrindra dia mety hitondra azy ireo.
Rehefa miresaka momba ny raharaham-barotra sy ny varotra ny olona, ​​dia mivadika foana ny sehatra Amazonamin'ny resaka ataony. Maherin'ny 80 tapitrisa ny mpampiasa no manoratra ny orinasam-panaon'i Amazon. Ny saram-pandraharahana isam-bolana ho an'i Amazon dia8 lavitrisa $, fa tsy fitakiana ny fandaniana mpikambana voalohany.
Nanjavona teo ambanin'ny sokajy lehibe i Amazonia. Ny fanontaniana dia hoe aNy orinasa madinika na eo an-toerana dia afaka mifaninana amin'ireo orinasa lehibe. Azo atao izany fa mitaky asa betsaka avy amin'ny mpivarotra azy.
Inona ny dokam-barotra nomerika kely sy eo an-toerana tokony hatao
Misy faritra efatra tokony hijerena ny fandraharahana raha toa ka tafavoaka velona izy ireotontolo dizitaly. Mety tsy miasa ho an'ny orinasa rehetra izy ireo, saingy manomboka toy ny fanombohana tsara izy ireo:
1. Famolavolana mifototra amin'ny toerana mampiasa Facebook, na Instagram.
2. Mampiasà fanombohana izay manampy ny mpanjifa mandamina sy mividy toy izany amin'ny internettahaka ny tsy misy fotony, ny Instacart, ny caviar, ary ny postmates.
3. Manolotra traikefa ambony na trano izay manolotra mpanjifamiaraka amin'ny mpivarotra
4. Nanangana tamba-tserasera e-varotra. Amin'ireny, dia mila mampiasa fitaovana toy nymibaribary amin'ny alalan'ny media sosialy (Facebook) mba hampitomboana ny varotra.
Tsy mora ho an'ny orinasa madinika noho ny fifaninanana mafy. Antenaina,Ny fahitana avy amin'i Semalt dia manome lanja ny zavatra vitsivitsy izay azony atao mba hitazonana ny lanjany sy hitohy hatrany.